Koboca Dhaqaale Ee Dalka
Marka dhinaca dhaqaalaha laga war bixinayo eryada ( GNP, Gross national Production) waxay u taagan tahay badeecadaha iyo adeegyada dalka gudihiisa laga soo saaray oo lagu daray muwaadinka debdedda ka sheqeeya lacagaha uu soo diray , iyado isla markaana laga jarayo dadka ajaanibka ee dalka gudihiisa ka shaqaysta kharashkooda madaama ay dalalkooda u dirayaan. Intaasi aya laga jaraa kharashaadka ama isticmaalka dalku galay.
Koboca dhaqaale ee dalkuna waa mid ku xidhan sida uu u kordhayo wax soo saarkiisu alaabada ama adeega u bixinayo waxana la yidhaa (GDP , Gross Domestic Product). Ama isugeynta wax soo saarka guud ee dalka. Dawladduna waa inay dagaal ku qaado sicir bararka samayska ah si aanay sumacadeedu hoos ugu dhicin iyadoo isha ku haysa meelaha ay ka soo xeroodaana dakhliga lacagaha adag ee dalka soo gala iyo sida ay u daboolayaan kharashaadka dalka.
Sida lacagaha muwaadinku soo diro oo ka mid ah dakhliga guud ee dalka iyadoo kan inla jooga kharash inagu yahay,. Haddaba haddii lacagahaasi si fiican aanay iyana baanka ugu soo dhicin ama dalka aanay soo gaadhin waxay noqonaysa dakhli dalka ka lumay oo isna qayb ka noqon kara sicir bararka jira.